Duqa Magaalada Aktas Oo Bixiya Taariikh Tareenka Xawaaraha Sare | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaDuqa magaalada Aktaş wuxuu siiyaa Taariikh Tareenka Xawaaraha Sare
11 / 01 / 2020 16 Bursa, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
baskan aktas wuxuu siiyay taariikh tareen xawaare sare leh
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktaş, oo ah dadka kunool 100 kun ee Gürsu'nun ayaa dhowaan u boodi doona si ay u cabbiraan qorshayaasha Gürsu ayaa sheegay in ay sidaas sameeyaan.
Alinur Aktaş, Duqa Magaalada Caasimadda, wuxuu la kulmay madaxdii Gürsulu iyadoo loo eegayo baaxadda 'Kulankii Mukhtars' ee cinwaan looga dhigay 'Metropolitan waa magaalo maskaxeed'. Duqa magaalada Gürsu Mustafa Işık iyo muruqyada xaafadaha Gürsu ee bartamaha iyo baadiyaha ayaa ka soo qeyb galay shirkii lagu qabtay Hoteelka Magaalada Giciprsu Boutique. Mustafa Ik ayaa khudbaddii furitaanka kulanka ka jeediyay marti-geliyaha wuxuuna uga mahadceliyay Duqa magaalada Aktaş danaynta uu ka leeyahay degmooyinka.
Khudbadiisa, Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, oo soo jiitay muhiimadda Bursa goob ahaan, wuxuu sheegay in Bursa ay tahay xarun ganacsi, xarun dhoofinta iyo wax soo saarka iyo magaalo wax soo saar. . Tareenka xawaaraha sare ayaa waxoogaa dib u dhacay, laakiin waxaan rajeynayaa taariikhda la bartilmaameedsaday inay tahay 2021. Markuu dhammaado, waad arki doontaa, Bursa waxay noqon doontaa saldhig wax soo saar oo dhameystiran, xarun dhameystiran oo soo jiidasho leh. Waxaan u diyaarinaynaa Bursa howlo caafimaad qabta waana qorsheyneynaa.
Gürsu si dhakhso leh ayey u koraysaa
Isagoo xusuusinaya in Gürsu ay tahay degmo si xawli ah u koraya oo horumarineysa oo ay ku nool yihiin 100 kun, Duqa magaalada Aktaş wuxuu yiri, “Waxaan leenahay 100 degmo oo ay ku nool yihiin dad ka badan 6 kun. Gürsu waa mid ka mid ah kuwa aad isugu dhow. Gürsu waxay ku boodi doontaa cabirka dareenkan. Sidaa darteed, waa inaan qorshaha ka dhigaa mid caafimaad qaba. Waxaan ka fikirnaa taas. In kasta oo qaar ka mid ah shaqadeenna ay ku jiraan barnaamijkayaga, haddana waxaan dooneynaa inaan arrimahayaga ku faahfaahinno annagoo wadatashi wada jir ah la sameynay mukhtaar. Madaxweynayaal iyo mukhtars ayaa sidoo kale lagu aaminay waajibaadkan. Midkeenna kama dhaxalno aabihiis. Shalay duqayaasheena way kala duwanaayeen, maanta waxaan nahay, berri waxaan yeelan doonnaa saaxiibo kale. Isla madaxdii ayaa u adeegsaneysa madaxdeena. Ugu dambeyntiina, waa aaminaad. Waxa ugu muhiimsani waa in loo matalo waxyaalahaas dib-u-qaabaynta sida ugu wanaagsan. Haddii aad wadahadal la leedahay dowladda hoose ee degmada iyo degmada, adiga iyo xaafadaada ayaa faa iidaysan doona, waana inaadan shaki ka qabin arrintaas ”.
Madaxweyne Aktaş ayaa injiilka siiyey! Goob kasta waxay la kulmi doontaa Metro
Madaxweyne Aktaş ayaa dhageysatay dhibaatooyinka xagga tareenka
Duqa magaalada Aktaş oo ku dhawaaqay Roadmap ... Gaadiidka ugu weyn ee Gaadiidka
Guddoomiyaha Aktas, 2 ayaa caddeeyay shaqada
Go'aanka maxkamadda ee ah in uu joojiyo baska ku yaalla magaalada Burco ee UK, ayaa indhaha ku haya madaxweynaha Aktaş'ta
Duqa magaalada Aktaş oo baadhay boqolaal boqolkiiba baabuurta korontada ku shaqeeya
Duqa magaalada Aktaş: Isticmaalka Bisikletka Bisikletka ee Bursa waa in uu noqdaa mid baahsan "
Agaasimaha Aktaş: "Waxaan qorsheyneynaa mustaqbalka Bursa ee gaadiidka Madaxweynaha
Guddoomiyaha Aktaş oo la kulmay OdayKoop Tradingmen
Madaxwayne Aktas, Ashura Ismaaciil ayaa ku sii jeeday Saldhiga Bursaray Osmangazi
Duqa magaalada Aktas oo doonaya inuu dhiso nalalka iftiinka ee 2019